Ọtụtụ puku ndị tọrọ atọ ka Southwest kagburu ọtụtụ narị ụgbọ elu ọzọ na Mọnde
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọtụtụ puku ndị tọrọ atọ ka Southwest kagburu ọtụtụ narị ụgbọ elu ọzọ na Mọnde
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Southwest, nke amaara maka ọnụ ahịa dị ala, kagburu opekata mpe ụgbọ elu 1,018 na Sọnde, nke ahụ bụ na mgbakwunye ụgbọ elu 808 kagburu na Satọde, dịka data nsuso ụgbọ elu si dị.
Ụgbọelu Southwest kagburu ụgbọ elu narị narị ọzọ n'ụtụtụ Mọnde ka ọrịa kansa ngwụcha afọ 2000 gachara.
Ọtụtụ puku ndị njem Southwest ahapụla ọdụ ụgbọ elu gburugburu mba ahụ.
Ndị ụgbọ elu Southwest tara ụta maka ọrịa kansa na nsogbu njikwa ụgbọ elu.
Mgbakasị izu ụka Southwest Airlines gara n'ihu taa, ebe onye na -ebu ụgbọ elu kagburu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu 350 n'ụtụtụ Mọnde.
Nsogbu ụgbọ elu Southwest ụgbọ elu bidoro na Fraịde mgbe oke ihu igwe na Florida na nsogbu njikwa ụgbọ elu butere ọtụtụ kagbuo, na-ahapụ ndị ahịa na ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
Ọtụtụ puku Southwest Airlines'ndị njem ka tọrọ atọ n'ọdụ ụgbọelu.
Na nkwupụta ngwụsị izu, Southwest Airlines tara ụta maka kagbuo ihe na -adịghị mma na njikwa ụgbọ elu na "ihu igwe na -akpaghasị," na -agbakwụnye na ha na -arụ ọrụ '' ịgbake '' ọrụ ahụ.
Ndị otu ọkwọ ụgbọ elu Southwest Airlines (SWAPA), nke na -anọchite anya ihe dị ka ndị ọkwọ ụgbọ elu 10,000, wụsara mmiri oyi na ntule nke ọgbaghara na -aga n'ihu, na -ekwu na Sọnde na ndị otu a “lekwasịrị anya na nchekwa nke ndị ọrụ anyị, ndị njem, na imeri ihe ịma aka nke ọrụ, ọ bụghị ọrụ na -abụghị nke iwu. omume. ”
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi na -ehota "isi mmalite ụgbọ elu" akọpụtala na ndị na -ahụ maka ụgbọ elu na -eme nnukwu "sickout" ma ọ bụ na -ejegharị na etiti ọdụ ụgbọ elu gọọmentị etiti na Hilliard, Florida maka ịgba ọgwụ mgbochi. Mkpesa a kọrọ kpatara “mkpamkpa” na -akpọnwụ Southwest Airlines'arụmọrụ.
N'ịzaghachi asịrị a na -eme maka ịgagharị agagharị n'ehihie Sọnde, Nchịkwa Federal Aviation (FAA) wepụrụ akụkọ ahụ, na -ekwusi ike na "enweghị mkpesa ndị ọrụ ụgbọ elu FAA akọbeghị kemgbe Fraịde."
A kọrọ na onye isi ndị ọrụ ụgbọ elu Jacksonville Aviation Authority Tony Cugno zigara ndị isi oche JAA ozi email, na-atụkwasị ụta maka mbibi ahụ na ụfọdụ ndị ọrụ na-ewere "akwụkwọ ha kwadoro nke ọma" na ndị njikwa ga-anọ n'ụlọ ruo awa 48 mgbe ha nwetasịrị COVID- 19 ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ndị ụgbọ elu SouthWest ghọrọ otu n'ime ndị na -ebu ụgbọ elu US ikpeazụ na -ewebata ikike ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ya na Mọnde gara aga. Ihe dị ka ndị ọrụ 56,000 Southwest nwere ruo Disemba 8 ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọgide na -arụ ọrụ ha.